ko htike's prosaic collection: ကိုရင် သာဂိ၏ မီဒီယာ မှတ်တမ်း ၁ (သို့) မှော်ဘီ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့နှင်းသဘင်
Posted by ကိုထိုက် at 09:28
ကိုရင်သာဂိ မှတ်တမ်းက ကလိလိုက်တာ. ဟိုမောင်ရင်တို့ ခံလဲမခံချင်၊ ရှက်ကလဲရှက်။ မှန်ကလဲမှန်နေတော့.ငြင်းကလဲမငြင်းနိုင်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့. သူတို့လေ့လာလိုက်စား တတ်ကျွမ်းသမျှလေးတွေ။ ကျင်လည်ကျက်စားနေကြ အပြာဆိုက်မျိုးစုံလင့်လေးတွေနဲ့ပဲ ကိုသာဂိမှတ်တမ်းတော်ကြီးကို ချီးကျူးထောပနာပြုသွားလေသည်ပေါ့။
Proud to be Burmese for developing and new system of Burmese way Democracy in Burma.
6 April 2009 at 18:44